ELT မှငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကြားခြင်း - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကင်ပိန်း
(ပြန်လည်တင်ပို့သည် - TESOL ဆက်သွယ်မှုများ။ ဇူလိုင်လ 2020)
Kip Cates အားဖြင့်
အကြောင်းအရာအခြေပြုဆရာများအတွက်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူများ၏ပုံပြင်များကိုကျောင်းသားများအားလှုံဆော်စေသောကောင်းမွန်သောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာခေါင်းစဉ်များကိုရှာဖွေရန်မှာစိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုဖြစ်သည်။
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုသည်ဘာသာစကားစာသင်ခန်းများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းသည်နှစ်စဉ်ကျင်းပသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းမီဒီယာများကိုစိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသက်အရွယ်မရွေးသင်ယူသူများ၏သိလိုစိတ်ကိုထိတွေ့စေသည်။ ၎င်းတွင်ဘာသာစကားသင်ယူမှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျောင်းသားများသည်ကမ္ဘာ့ရေးရာများကိုစိတ်ဝင်စားမှုကိုလှုံ့ဆော်သည်၊
ဉာဏ်စမ်းပဟေandိများနှင့်ဂိမ်းများမှဖတ်ရှုခြင်းများနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက်ဤခေါင်းစဉ်ကိုသင်ကြားရန်အတွက်များစွာသောလှုပ်ရှားမှုများရှိသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအရာများသည်ကျွန်ုပ်၏အတန်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်အရာများဖြစ်သည်။ ဤအစမ်းကြိုးစားသို့မဟုတ်လိုအပ်သလိုသူတို့ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အခမဲ့ခံစားရသည်။
ခေါင်းစဉ်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်သောအခါ၊ သူတို့သိသောအရာများကိုသိရှိရန်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသည့်ကျောင်းသားများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်ကောင်းပါသည်။ ဒီသင်ကြားရေးယူနစ်ကိုစတင်ရန်ကျောင်းသားများကိုအတွဲလိုက် ထား၍ အောက်ပါမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပါ။နောကျဆကျတှဲတစ်ဦးက [.pdf]၊ အဓိကဖြေပါ။ ) သင့်ကိုယ်သင်စမ်းကြည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဗဟုသုတကိုစမ်းသပ်ပါ။
Alfred Nobel အကြောင်းလေ့လာခြင်း
ဉာဏ်စမ်းပဟေိအပြီးတွင်အဲလ်ဖရက်နိုဘယ်လ်နှင့်သူတည်ထောင်ခဲ့သောနိုင်ငံတကာဆုများကိုသင်ယူရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဤသင်ကြားရန်ငါနားလည်သဘောပေါက်ရန်မေးခွန်းများနှင့်အတူအောက်ပါစာဖတ်ခြင်းကျမ်းပိုဒ်ဒီဇိုင်း (နောကျဆကျတှဲခ, .pdf) ။
ကျောင်းသားများသည်အဲလ်ဖရက်နိုဘယ်နှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံအယူအဆတစ်ခုပြီးသည်နှင့်သူ၏နှစ်ပတ်လည်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုရရှိသူများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ကျောင်းသားများကိုအုပ်စုများ ဖွဲ့၍ ၎င်းတို့သိသည့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိသူများကို ဦး နှောက်တွင်းသို့သုတ်သင်ပါ။ ထို့နောက် ၁၉၀၁ မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိကျွန်ုပ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖန်တီးခဲ့သည့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုအားလုံး၏မာစတာစာရင်းကိုထုတ်ပေးပါ။ နောက်ဆက်တွဲဂ (.pdf)
အခြေခံဘာသာစကားလေ့ကျင့်မှု (မေးခွန်းများ - မေးခွန်း)
သူသည်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုရရှိခဲ့သည် 1984 ?
ဘယ်တော့ ယူနီဆက် နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရ
ဒီနှစ်မှာလူဘယ်နှစ်ယောက်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရခဲ့သလဲ 2011 ?
Scavenger Hunt အိမ်စာ (ဘယ်သူမဆိုရှာရန်)
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်အမျိုးသမီး ၁၇ ဦး မည်မျှရှိသည်ကိုရှာဖွေပါ။
ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အောက်ခြေလူတန်းစားဘဏ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတစ် ဦး ကိုရှာပါ။ (Mohammad Yunus, 2006)
အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာပြီးအငြိမ်းစားယူပြီးနောက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အမေရိကန်မြေပဲစိုက်တောင်သူတစ် ဦး ကိုရှာပါ။ (ဂျင်မီကာတာ၊ ၂၀၀၂)
နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုဘယ်တော့မှမရခဲ့သည့်ကျော်ကြားသောငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူကိုရှာပါ။ (ဥပမာ - ဂန္ဒီ၊ ပီယာဒီကူဘာတန်၊ အိုလံပစ်အားကစားကိုတည်ထောင်သူ)
အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းတွင်ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုများကိုရပ်တန့်ရန်လုပ်ဆောင်သောကက်သလစ်တစ် ဦး၊ ပရိုတက်စတင့်တစ် ဦး - အမျိုးသမီးနှစ် ဦး ကိုရှာပါ။ (Betty Williams နှင့် Mairead Corrigan၊ ၁၉၇၆)
တိုက်ပွဲများရပ်တန့်သွားသောငြိမ်းချမ်းရေး၌ရန်သူနှစ်နိုင်ငံမှခေါင်းဆောင်နှစ် ဦး ကိုရှာဖွေပါ။ (ဥပမာ၊ Anwar Sadat နှင့် Menachem Begin, 1978)
သူတို့ရဲ့အစိုးရများကဖမ်းဆီးထောင်ထဲမှာနှင့်သူတို့၏ဆုလက်ခံခြင်းမှတားဆီးခဲ့ကြသူသုံးဆုရရှိသူကိုရှာပါ။ (Carl von Ossietzky၊ နာဇီဂျာမနီ၊ ၁၉၃၅; ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ မြန်မာ၊ ၁၉၉၁; Liu Xiaobo, China, 1935)
“ ဘယ်သူကိုခန့်ထားပါ” - ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကဒ်ဂိမ်း
ကျောင်းသားများအားစာရင်းနှင့်ပါ ၀ င်စေနိုင်သည့်နောက်“ Guess who?” ကိုကစားရန်ဖြစ်သည်။ ဂိမ်း။ အဲဒီအတွက်ပရိုဖိုင်းကတ်ရှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တယ်။နောက်ဆက်တွဲ။, .pdf) ။ ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲ
Research Task - ငြိမ်းချမ်းရေးဆုသုံးခုကိုသုံးပါ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သုတေသနကျွမ်းကျင်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ကျွန်ုပ်အားကျောင်းသားများကိုစာရင်းမှဆုရရှိသူသုံး ဦး ကိုရွေးချယ်ရန်၎င်း၊ သုတေသနလုပ်ရန်၊ အစီရင်ခံစာတစ်ခုရေးရန်သို့မဟုတ်တစ်ခုချင်းစီနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြရန်ကျောင်းသားများကိုကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းထားသည် -
နောက်ခံသမိုင်း: သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲ။ ဘယ်မှာလဲ၊ ဘယ်တော့မွေးတာလဲ။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆု သူတို့ဘာကြောင့်နိုင်ခဲ့တာလဲ သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲ
comments: ဘာကြောင့်သူတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ ဘာတွေသင်ယူခဲ့တာလဲ
ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိသူများအကြောင်းလေ့လာရန်နောက်တစ်နည်းမှာ၎င်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ကိုးကားချက်များကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ပါနမူနာသည် (နောကျဆကျတှဲ E, .pdf) ။ ကျောင်းသားများသည်ကိုးကားချက်များကိုဖတ်ရန်၊ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်အုပ်စုများတွင်သူတို့ရွေးချယ်ထားသောကိုးကားချက်များနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဆွေးနွေးပါစေ။
ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်ရေးသည်အာဏာမဟုတ်ပါ၊ စစ်၏အကြောင်းရင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်း။ (Lester B. Pearson)
ကျွန်ုပ်တို့သည်ညီအစ်ကိုများကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ရမည် (သို့) လူမိုက်များကဲ့သို့အတူတကွပျက်စီးဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်။ (မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာ)
လူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်တိုင်းသူပြည်သားများလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည့်နေရာတွင်သာလျှင်ငြိမ်းချမ်းရေးသည်တည်တံ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ (ဒလိုင်းလားမား)
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကျင့်အားလုံးသည်ငြိမ်သက်ခြင်း၏အကျင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှလုပ်ဆောင်သည်ကိုမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောလုပ်ရပ်၌ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှချစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ (မေမေထရီဇာ)
ငြိမ်းချမ်းရေးသည်မြေတစ်ကွက်ထက် ပို၍ အဖိုးတန်သည်။ (အန်ဝါဆဒတ်)
နိုင်ငံများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အပြန်အလှန်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်မယုံကြည်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးယုံကြည်မှုနှင့်ကွဲပြားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကောင်းသောစိတ်ဆန္ဒဖြင့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါကတည်တံ့သောငြိမ်းချမ်းရေးကိုအလွယ်တကူတည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မည်။ (Fridtjof Nansen)
အောင်မြင်မှုများကိုတင့်ကားများနှင့်ဒုံးကျည်များဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်အမှန်တရား၊ ရိုးသားမှု၊ (Lech Walesa)
သင်၏ရန်သူနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးရလိုလျှင်သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လိုသည်။ ထို့နောက်သူသည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာသည်။ (နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား)
မှ ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးစေ့ ဂျေ Larson, 1987, နယူး Society က။
စတော့ဟုမ်းနိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိသူများအားလုံးလက်ခံစကားပြောကြားကြသည်။ ၎င်းသည်စာဖတ်ခြင်း၊ နားထောင်ခြင်းနှင့်လူထုစကားပြောခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအဆင့်မြင့်အတန်းများအတွက်အကြောင်းအရာများစွာဖြစ်နိုင်သည်။ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ထားသောလက်ခံမှုမိန့်ခွန်းများရေးသားထားသောစာများကိုတွေ့နိုင်သည် နိုဘယ်ဆု.
အကယ်၍ သင်သည်ကျောင်းသားများကိုပိုမိုပါ ၀ င်စေလိုပါကလာမည့်နှစ်အတွက်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရပါ။ ၎င်းတို့ကိုအုပ်စုများအဖြစ်ခွဲပါ (ဥပမာ - တိုက်ကြီးတစ်ခုစီအတွက်တစ်ခုစီ)၊ အုပ်စုလိုက်သုတေသနတစ်ခုစီ ပြုလုပ်၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုတင်ဆက်ပါ၊ ထို့နောက်အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။ တရားဝင်လက်ခံရရှိသူများကိုအောက်တိုဘာလတွင်ကြေငြာမည်ဖြစ်ရာကျောင်းသားများသည်သူတို့၏ရွေးချယ်မှုကိုအမှန်တကယ်ရရှိသူ (များ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
နောက်စိတ်ကူးတစ်ခုကတော့သင်၏ကိုယ်ပိုင်“ စာသင်ခန်းငြိမ်းချမ်းရေးဆု” ကိုဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ သင့်အသိုင်းအဝိုင်း၊ မြို့၊ တိုင်းသို့မဟုတ်ဒေသမှငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဆောင်သူများအားကျောင်းသားများကိုသုတေသနပြုပါ (နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်အင်တာဗျူးပါ) ။ ကျောင်းသားများအားဤလူ (သို့) အုပ်စုများကိုတင်ပြရန်ပြောပါ။ ထို့နောက်သင်၏လူတန်းစားဆုကိုချီးမြှင့်မည့်အတန်းအစားတစ်ခုအတွက်မဲပေးပါ။
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အကျော်ကြားဆုံးဆုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအခြားငြိမ်းချမ်းရေးဆုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားများအားသုတေသန၊ စာရေးခြင်းသို့မဟုတ်တင်ပြခြင်းအားဖြင့်ထိုစက်ကိုတိုးချဲ့ပါ။ ဥပမာများတွင်ပါဝင်နိုင်သည်
Niwano ငြိမ်းချမ်းရေးဆု (ဂျပန်)
ကျွန်ုပ်၏ ၂၅ နှစ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုကျောင်း၌ကျောင်းသားများအပြုသဘောဆောင်စွာတုံ့ပြန်ပုံကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစိတ်ထိမိသည်။ အထူးသဖြင့်ဆုရှင်တွေရဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုသူတို့အထင်ကြီးစေတယ်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ! နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိသူများတွင်စစ်ပွဲများကိုရပ်တန့်ရန်၊ စိတ်စွန်းကွက်မှုများကိုတိုက်ဖျက်ရန်၊ ဆင်းရဲမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်၊ လူ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ရန်၊ သူတို့ပါဝင်သည်
ဆယ်ကျော်သက်များ (မလလာ၊ ၁၇ နှစ်) မှသက်ကြီးရွယ်အိုများအထိ (ဂျိုးဇက်ရော့ဘလတ်၊ ၈၇ နှစ်) အသက်အရွယ်မရွေးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ။
သာမန်လူများ - လျှပ်စစ် (Lech Walesa)၊ ဆရာဝန်များ (Albert Schweitzer)၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ (Andrei Sakharov), ရှေ့နေများ (Shirin Ebadi)
ဥရောပ၊ အာရှ၊ အာဖရိက၊ မြောက်အမေရိက၊ လက်တင်အမေရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသအသီးသီးမှလူမျိုးစုအသီးသီးမှပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်
ဤနေရာတွင်လှုပ်ရှားမှုများသည်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုသည်အကြောင်းအရာအခြေပြုအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းများအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ်ပြသနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ နောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှုများစွာလည်းရှိနိုင်သည်။ - သရုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကားများ၊ ကိုက်ညီသည့်အလုပ်များ (အောင်မြင်သူများကိုသူတို့၏လုပ်ရပ်နှင့်ကိုက်ညီပါစေ) နှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများ (သူတို့တကယ်အနိုင်ရတာလား။) ။ နောက်ထပ်အတွေးအခေါ်များကိုနိုဘယ်ဆုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည် နိုဘယ်လ်သင်ခန်းစာဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်“ နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုသင်ကြားခြင်း” အခမဲ့ခံစားရပါ ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ အကယ်၍ သင် Nobel Peace Prize PowerPoint မိတ္တူကိုစာသင်ခန်းတွင်အသုံးပြုလိုပါကသို့မဟုတ်ဤအကြောင်းအရာနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေရန်
ဤအရေးကြီးသောအကြောင်းအရာကိုသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများအားငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အုပ်စုများကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ စိတ်စွန်းကွက်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကင်းသောကမ္ဘာကိုအောင်မြင်ရန်သူတို့၏ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုမည့်အနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်သူများဖြစ်လာစေရန်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။
Feldman, ခ (2012) ။ နိုဘယ်ဆု - ပါရမီရှင်၊ အငြင်းပွားဖွယ်ရာနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာတို့၏သမိုင်း။ Arcade ။
စိတ်အားထက်သန်, အေ (1998) ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်သူများ - နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရ (Oxford profile) ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း။
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတရားဝင် site ကို
"နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။” (၆ မိနစ်)
"ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်အားလုံး | ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်များစာရင်း” (၆ မိနစ်)
Larson, ဂျေ (1987) ။ ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးစေ့များ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအသစ်။
[icon name = "download" class = "" unprefixed_class = ""] ဒေါင်းလုပ် ဤဆောင်းပါးတွင် (PDF) နှင့် နောက်ဆက်တွဲများ (PDF)
Kip Cates ဂျပန်နိုင်ငံ Tottori တက္ကသိုလ်မှဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခဖြစ်သည်။ သူသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနှင့်စာရေးဆရာ၊ ဟောပြောသူနှင့်ဆရာသင်တန်းဆရာအဖြစ်ဘာသာစကားသင်ကြားခြင်းနယ်ပယ်များတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်သည်။ သူသည် TESOL ၏လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာစိတ် ၀ င်စားမှုအပိုင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ဂျပန် NGO ငြိမ်းချမ်းရေးလှေမှ lect ည့်ကထိကနှင့် JALT ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြuesနာများအထူးအကျိုးစီးပွားအုပ်စု၏ဥက္ကchair္ဌနှင့်၎င်း၏သုံးလတစ်ကြိမ်အယ်ဒီတာ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘာသာစကားပညာရေးသတင်းလွှာ.
ကျွန်တော်တို့ဟာ Hardwired စစ်ပွဲကိုမွေးဖွားလား။
Phill Gittins နှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးတွင်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းတည်ဆောက်ပုံ၊
ဘာသာစကားပညာရေးအတွက်ဂလိုဘယ်ပြuesနာများအထူးစိတ်ဝင်စားမှုအုပ်စုသည်သူတို့၏သတင်းလွှာ ၁၀၀ မြောက်ထုတ်ဝေမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်
သြဂုတ်လ 16, 2016 လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများ 0
ဘာသာစကားပညာရေးအတွက်ဂလိုဘယ်ပြIssနာများဘာသာစကားသင်ကြားရေးဂျပန်အသင်း၏အထူးစိတ် ၀ င်စားမှုအုပ်စုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြofနာများ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိပညာနှင့်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးတွင်လူမှုရေးတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများအပြင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရေးနယ်ပယ်များတွင်အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုများနှင့်ဘာသာစကားဆရာများအကြားအသိအမြင်မြှင့်တင်မှုကိုမြှင့်တင်သည်။ ၊ လူ့အခွင့်အရေးပညာပေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပညာရေး။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2021 အင်္ဂါရပ်များ 2